माधव नेपाल विपक्षी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार !
21st May, 2021 Fri १४:२०:५१ मा प्रकाशित
काठमाडौं। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानिलकण्ठमा बसेको विपक्षी दलका नेताहरुको बैठक सकिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता डा. बाबुराम भट्टराईसमेत देउवा निवास पुगेपछि छलफल सुरु भएको थियो।
बैठकमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले यसअघि गरेको निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल भएको बुझिएको छ। यस्तै ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने आधार तयार गर्ने अवस्थाबारेमा पनि छलफल भएको थियो।
ओलीले जसपाकै महन्थ ठाकुर पक्षको समर्थनमा फेरि सरकार बनाउने सम्भावना रहेको भन्दै उपेन्द्र–बाबुरामले नयाँ विकल्पमा छलफल गरेका छन्। देउवा निवास आउनुअघि आफूहरुले महन्थलाई प्रधानमन्त्रीका लागि तयार हुन भनेको उपेन्द्रले जानकारी दिएको बुझिएको छ। तर महन्थले भने उपेन्द्रको प्रस्ताव कांग्रेस माओवादीले स्वीकार गरे मात्र आफ्नो धारणा दिने बताएको जानकारी दिएका छन्।
यदि महन्थले प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गरे लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई अगाडि बढ्नसमेत आग्रह गर्ने तयारी भएको छ। महन्थको विकल्पमा माधवजी हुन सक्नुहुन्छ भन्दै उपेन्द्रले नै यस्तो प्रस्ताव राखेको स्रोतले जनाएको छ।
नेपालले आफूनिकटस्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरुलाई ओलीविरोधी गठबन्धनमा प्रस्तुत गरिसकेका छन्। विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेपाल समूहमा ४० भन्दा बढी सांसद पुगेका छन्। उनीहरुले नेपाललाई नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा साथ दिने भएका छन्। काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १६ सांसदका अलावा नेपाल समूहका ४० सांसदको हस्ताक्षर बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी भएको छ।
Tags नेकपा एमाले राष्ट्रपति संसद